- ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသောစုံတွဲများသည် သန္ဓေမအောင်ခြင်း (သို့ ) မြုံခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။. သန္ဓေမအောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အကာအကွယ်မပါသော လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသော်လည်းအချိန်တစ်နှစ်ထိကိုယ်ဝန်မရရှိခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ထိုသို့သောစုံတွဲများ၏တဝက်ကျော်သည် ယောကျာၤးမြုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ကလေးမရရှိခြင်းသည် အဓိက လက္ခဏာတရပ်ဖြစ်ပါသည်။
- အခြားလက္ခဏာများဖြစ်သော သုတ်ကောင်အရေအတွက်လျော့နည်းခြင်း ၊ သုတ်လွှတ်နည်းခြင်း ၊ပန်းသေပန်ညိုးခြင်း ၊ကပ္ပာယ်အိပ်ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း၊အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ခြင်း၊ အနံ့ခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းခြင်း၊ ရင်သားများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အမွှေးအမျှင်များလျော့နည်းလာခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကပ္ပာယ်အိပ်ပိုးဝင် ယောင်ရမ်းခြင်း
-ဝှေးစေ့ကင်ဆာ နှင့် အခြားသောကင်ဆာများ
-ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း နှင့် Chemicals များနှင့်ထိတွေ့မှု များ
-ပူလွန်းသောနေရာတွင်ကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်း တို့သည် သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်မှုထိခိုက်၍
-အပူနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့၍အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ ( eg Drivers,Industrial Workers etc.)
-ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားသူများ ( အူအတက်ခွဲထားခြင်း၊ကပ္ပာယ်အိပ်ခွဲထားခြင်း )
-သုတ်ပိုးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း ( သုတ်ပိုးအရေအတွက်၊ သုတ်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ )
-စအိုတွင်းမှနေ၍ အယ်ထရာလ်ဆောင်း ရိုက်ခြင်း
သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်မှုနည်းခြင်း၊သုတ်ပိုးလုပ်ငန်းဆောင်တာမမှန်ခြင်း၊ သုတ်သယ်ဆောင်ရာလမ်းကြောင်းတွင်ပိတ်ဆို့နေခြင်း၊ဖျားနာခြင်း၊ထိခိုက်ခြင်း,နာတာရှည်အဖျားရောဂါ၊လူမှုဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ နှင့် အခြားအကြောင်းအရာများ ကြောင့် အမျိုးသားမြုံခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ကလေးမရရှိခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးရှုပ်ထွေးစရာကိစ္စဖြစ်သော်လည်း ကုသမှုနည်းလမ်းများစွာလည်းရှိနေပြီဖြစ်သည်။